Semalt: ayszọ iji nyochaa arụmọrụ SEO gị
1. Okwu mmeghe
2. Gini mere iji nyochaa oru SEO gị na mbu?
3. Nyochaa arụmọrụ SEO gị
7. Peeji ọsọ
Wantchọrọ ịnye ọkwa dị elu na Google TOP? Chọrọ ịchụkwuo okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị? Chọrọ ịbawanye uru ịga nke ọma nke azụmahịa gị? Ihe nyocha SEO nwere ike ịbụ naanị ihe ịchọrọ. Ihe omuma a zukọtara nwere ike inye aka na ime mkpebi dị iche iche iji melite ogo nke weebụsaịtị gị na ngwa ọchụchọ, chụkwuo okporo ụzọ na saịtị gị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Semalt nwere ngwá ọrụ nyocha weebụsaịtị dị ike maka nlele ahịa dị irè; ọnọdụ nsuso weebụsaịtị gị na nke ndị asọmpi gị; ha nyefekwara gị akụkọ nchịkọta ihe nyocha.
Gini mere iji nyochaa oru SEO gị na mbu?
1. Iji lelee ọnọdụ weebụsaịtị gị: Na Semalt, enyere gị aka ịmepụta foto zuru oke banyere ihe na-echere azụmahịa gị n'ahịa ịntanetị. Site na ozi enwetara, ị ga - enwe ike igosipụta isi ihe dị mkpa na ọrụ gị n'ọdịnihu.
2. Tochọpụta ahịa ọhụụ: will ga-achọpụta ohere ọhụụ iji kesaa ngwongwo na ọrụ gị yana mmepe mmepe nke ụdị aha gị na mba ụfọdụ akọwapụtara nke ga-akpalite atụmatụ azụmahịa metụtara mpaghara maka azụmahịa gị.
3. Iji lelee ọnọdụ ndị asọmpi gị: Semalt na-ekpughere ozi niile gbasara ọnọdụ ahịa ndị asọmpi gị. Ihe omuma a ga - enyere gi aka ịzụlite usoro dị mma iji nọrọ n'ihu ngwungwu ahụ mgbe niile dịka ị ga - achọpụta ihe ha na - eme ziri ezi nke ị nwere ike ịbanye n'ime usoro nke ụzọ dị irè.
4. Iji gosipụta nyocha gị: Semalt na- enye gị ohere pụrụ iche iji kọwaa akara ngosi nke nyocha gị nke ị nwere ike ibudata ngwa ngwa PDF ma ọ bụ n'ụdị EXCEL ozugbo site na saịtị ha. Nke a dị ezigbo mkpa mgbe ịchọrọ ịme ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị otu gị ihe ngosi.
Nyochaa arụmọrụ SEO gị
Mgbe ịbanye na dashboard gị, ịnwere ike pịa akara menu site n'aka ekpe ebe ị ga-ahụ ndepụta nke nhọrọ maka nyocha SEO.
Na elu kachasị elu, ị nwere nhọrọ ịtinye weebụsaịtị ịchọrọ nyochaa. N'okpuru nke a, ị nwere bọtịnụ dashboard gị nke ị nwere ike pịa mgbe ọ bụla ọ bụla ọ dị gị ka ị na-aga dashboard gị.
Mgbe ahụ dị n'okpuru bọtịnụ dashboard, bụ ngwaọrụ nchịkọta nke Semalt bụ nke kewara gaa na ngalaba 4 - SERP, Ọdịnaya, Webmasters na Page Speed.
Ka anyị hụ otu n'ime ngwaọrụ ndị a si arụ ọrụ. Ọ dị mkpa iburu n’obi ebe a na ị nwere ike ibudata akụkọ oge ọ bụla ebe ị hụrụ bọtịnụ ‘Get Report’.
SERP nwere mpaghara atọ n'okpuru ya:
a. Keywords na TOP: Akụkọ sitere na ebe a gosipụtara isi okwu niile saịtị gị dị na nsonaazụ ọchụchọ nke organic, peeji a họọrọ, na ọnọdụ SERP ha maka otu isiokwu. Mgbe ịpịrị ‘Keywords na TOP’, a ga-akpọrọ gị gaa na peeji ebe ị ga-ahụ ọnụọgụ nke mkpụrụokwu na TOP, nkesa mkpụrụokwu site na TOP na ọkwa site na igodo.
'Number nke Keywords' bụ eserese nke na-egosi ọnụọgụ isi okwu na Google TOP n'ofe oge. Nke a na - enyere gị aka ịlele mgbanwe nke ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụokwu nke weebụsaịtị gị maka na TOP 1-100 nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ.
Site na 'nkesa mkpụrụedemede sitere na TOP', ị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke isiokwu gị na ebe nrụọrụ weebụ maka Google TOP 1-100 nsonaazụ ọchụchọ nke edobere megide ụbọchị gara aga.
'Ọnọdụ site na mkpụrụokwu' bụ okpokoro gosipụtara gị akara mkpụrụokwu kachasị ewu ewu na ibe weebụ gị maka ogo Google Search results. Tebụl ahụ ga-egosikwa gị ọnọdụ ọrụ ha maka ụbọchị ahọpụtara na mgbanwe ndị emegoro na-emegide ụbọchị gara aga. Mgbe ịpịpịrị bọtịnụ ‘jikwaa otu’, ị nwere ike ịmepụta otu ọhụụ nke Keywords, jikwaa ndị dị adị ma ọ bụ ị nwere ike họrọ ịhọrọ isi okwu na tebụl ‘Ọnọdụ site na Keywords’ n’okpuru ma tinye ha n’otu nke mkpụrụokwu. Nke a dị mkpa na ị nwere ike iji ya iji nyochaa ọganihu weebụsaịtị gị site na isiokwu, URL, wdg.
Semalt na-enyekwa gị ohere inyocha data ahụ na tebụl site na iji usoro dị iche iche - isiokwu ma ọ bụ akụkụ ya, URL ma ọ bụ akụkụ ya, Google TOP 1-100 na mgbanwe ọnọdụ.
b. Peeji kachasị mma: Mgbe ịpịrị 'peeji ndị kachasị mma', ị ga-egosi peeji ndị dị na saịtị gị na-ebute ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke okporo ụzọ organic. Shouldkwesiri nyochaa nke a, icho njehie SEO peeji, idozi njehie ndị a, na-agbakwunye ọdịnaya pụrụ iche yana ịkwalite ibe ndị a maka ọtụtụ okporo ụzọ site na Google.
'Akwụkwọ kachasị mma n'oge oge' bụ eserese nke na-ekpughe mgbanwe nke ọnụọgụ ibe weebụ gị na TOP kemgbe mmalite nke ọrụ gị. Nwere ike ịlele data kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa mgbe ị na-atụgharị ọnụ ọgụgụ ahụ.
N’okpuru ‘peeji ndị kachasị mma n’oge,’ i nwere otu ‘Ihe Odiche’ nke na-enyere gị aka ịchọta ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị dị na Google TOP 1-100 nsonaazụ ọchụchọ ebumpụta ụwa setịpụrụ n’oge gara aga. You nwere ike ịgbanwere nha iji chọpụta ọdịiche kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa. Alsonwekwara nhọrọ iji lee ihe dị iche na ọnụọgụ ma ọ bụ na esereese.
Enwekwara eserese a na-akpọ 'Selected peeji keywords stats' nke na-egosi ngbanwe ọnụọgụ nke mkpụrụokwu edepụtara ahọrọla na Google TOP site na mmalite ọrụ ahụ.
Nke ikpe azu, anyi nwere 'Peeji ichiiche na TOP', nke a bu okpokoro gosiputara onu ogugu isi okwu a ka edobero na Google TOP maka ubochi ndi ahuru. I nwekwara ike nyochaa ndepụta peeji kacha mma site na URL ma ọ bụ akụkụ ya ma họrọ ịhọrọ peeji ndị dị na weebụsaịtị gị nke nọ na ogo TOP 1-100.
c. Ndị asọmpi: Nke a bụ ebe ị ga-achọpụta ebe nrụọrụ weebụ niile na ogo TOP 100 maka mkpụrụokwu yiri ya na weebụsaịtị gị nwere. Will ga-ahụkwa ebe ị kwụ n’etiti ndị na - ebuso gị agha site na ọnụọgụ isi okwu niile na TOP 1-100.
Na ibe a, ị ga-ahụ otu ngọngọ akpọrọ 'Shared Keywords' nke gosipụtara ọnụọgụ nke mkpụrụedemede ịkekọrịtara na saịtị gị yana ogo TOP 500 gị maka Google SERP.
Ọzọ, ịchọta 'Amalitere Keywords Dynamics' nke bụ eserese na-egosi mgbanwe na ọnụọgụ nke mkpụrụedemede ịkekọtara ọnụ maka ndị asọmpi akọwapụtara nke ịgogogogogoro elu na TOP.
N’okpuru, ị ga - ahụ ‘Asọmpi na Google TOP’ nke bụ tebụl nke na - ekpughe ọnụọgụ nke mkpado isiokwu gị na ndị asọmpi gị na saịtị wepụtara maka TOP. Semalt na-enye gị nhọrọ iji mụọ ihe dị iche na ọnụọgụ nke mkpụrụedemede ịkekọrịta setịpụrụ maka ụbọchị gara aga. I nwekwara ike nyochaa ndepụta nke weebụsaịtị weebụsaịtị gị site na iji ngalaba zuru ezu ma ọ bụ akụkụ ya ma ị nwere ike ịdebanye ndepụta ahụ na naanị weebụsaịtị ndị abanyela na TOP 1-100.
N'okpuru ngalaba ọdịnaya, ị ga-ahụ ngwaọrụ 'Pụrụ iche Nyocha' nke mgbe ịpịrị ga-eduru gị gaa na ibe ya. Nke a bụ ebe ị ga - achọpụta ma ọ bụrụ na Google na - eche na ntanetị weebụ gị pụrụ iche ma ọ bụ na ọ hụghị I kwesiri iburu n’uche na oburu n’onwere obi abua n’ile anya na ihe webusaiti gi di n’otu, odi onye ozo aputa ya. Ma ọ bụrụ na onye ahụ na-ewepụta ọdịnaya ha tupu nke gị, Google ga-amata nke ha dịka isi mmalite ebe a ga-akpado ọdịnaya gị. Chọghị ka ntaramahụhụ Google baara gị uru n'ihi na Google na-ata gị ahụhụ ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ọdịnaya nke plagiarized na weebụsaịtị gị.
Semalt na-enye gị akara pụrụ iche pasent iji mee ka ị mara otú ọdịnaya weebụ gị na-eme n'anya Google. Ihe ngosi 0-50% na-agwa gị na Google na-atụle ọdịnaya gị na enweghị ohere nke ogo ọnọdụ maka webpage dị otú ahụ. Semalt nwere ike inyere gị aka dochie ọdịnaya gị ugbu a na nke pụrụ iche iji nye gị akara ngosi kachasị mma.
Na 51-80%, Google na-ahụta ọdịnaya gị dị ka ịdezigharị kachasị mma. Ihu ntanetị webusaiti gị nwere ohere dị nwayọ na ntanetị ọnọdụ uto. Mana kedu ihe ị ga-eji dozie maka mgbe Semalt nwere ike inye gị ihe kacha mma?
Na 81-100%, Google lere ibe gị anya dị ka ihe pụrụ iche, ọnọdụ websaịtị gị ga-akachasị eto na Google SERP.
Will ga - ahụ ndepụta nke ọdịnaya ederede niile nke Googlebot na - ahụ na ibe weebụ n'otu ajụjụ (Semalt ga - enyere gị aka igosipụta akụkụ akụkụ abụọ nke ọdịnaya webpage).
Ọzọkwa, ị ga-ahụ okpokoro a na-akpọ 'Original Content Source'. Nke a bụ ndepụta weebụsaịtị nke Google tụlere isi mmalite nke ọdịnaya ibe weebụ gị. N'ebe a, ị nwere ike ịmara nke ọma ihe akụkụ dị na peeji gị ka a hụrụ na weebụsaịtị nke ọ bụla.
Nke a bụ ọrụ na-egosi gị otu esi gosipụta weebụsaịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ nke organic ma na-akọwapụta isiokwu maka gị. N'okpuru nke a, ị ga - ahụ nyocha, arụmọrụ yana ntanetị saịtị.
a. Isi: Na nchịkọta ngalaba, ị nwere ike nyefee ma nyochaa weebụsaịtị gị. I nwekwara ike itinye URL gị na ntinye Google.
b. Arụmọrụ: data enwetara ebe a ga-agwa gị etu esi websaịtị gị ọfụma. You nwere ike ịtụle data maka ụbọchị / oge akọwapụtara. Nke a ga - enyere gị aka ịchọpụta ike nke weebụsaịtị gị yana njehie ọ bụla na - emetụta ogo gị na TOP.
c. Sitemaps: Nke a bụ ebe ị nwere ike nyefee saịtị saịtị gị na Google ka ị hụ ebe edepụtara saịtị ahụ na ole ndị nwere njehie.
N'okpuru tebụl 'n'okpuru n'okpuru Sitemaps', ị nwere ike ịhụ ọnụọgụ nke webmaps ị nyeferela na njikwa ọchụchọ Google. Si ebe a ị nwere ike lelee ọnọdụ ha yana ọnụọgụ URL ha nwere.
A na-eji ngwaọrụ 'Page Speed Analyzer' mee ihe iji chọpụta ma oge iwere peeji gị zutere ụkpụrụ Google. Ọ ga-ahụpụta njehie chọrọ ndozi ma na-enye gị nkwalite mmezi nke ị nwere ike itinye iji melite oge ibu nke webpage gị. Ọ ga-elateomi ọkara oge maka ma desktọọpụ na ihe nchọgharị alagbeka.
Otu onye enweghị ike ikwubiga okwu ókè banyere ịdị mkpa nke nyocha arụmọrụ SEO gị na site na edemede a, ị nwere ike ịhụ otu esi eme nke a n'ụzọ kacha mma - Semalt ụzọ.